Zvaunonyanya kukosha zvakakosha kwatiri, saka tave neChinyorwa Chebumbiro chine ruzivo rwakakosha semunhu wekuti tiri ani, sei uye nei tichiunganidza mashoko ako ega, uyewo maitiro atinoshandisa nekuchengetedza ruzivo urwu, kusanganisira maererano nekusvika kwako uye kushandiswa kwewebsite yedu uye maitiro (apps). Tinokumbira kuti iwe uverenge zvakanyatsonaka sezvo iine ruzivo rwakakosha uye inotsanangura kuti ungatitaurira sei kana une mibvunzo. Uyewo fadza cherechedza kuti kuburikidza uchishandisa masangano edu, tinofunga kuti iwe unofara kwatiri kuti tishandise ruzivo rwako rwehupenyu sezvinotsanangurwa muNyaya yeMagariro.
Broadcast Beat is digital media media yakagadzirirwa kupa teknolojia nhau-uye-ruzivo kumushambadziro, mifananidzo yefambiro uye mushizha wekugadzira. Isu tiri pa 4028 NE 6TH Avenue, Fort Lauderdale, FL 33334. Nhamba yedu yekukurukura ndeye 954-233-1978. Kuwanika pachikwata chedu kunowanikwa zvakananga kuburikidza newebsite yedu Www.broadcastbeat.com. Broadcast Beat yakazvipira kuchengetedza kuvanzika uye data yevaya vanotevera zvatinenge tichiverenga.
Mashoko Akwo Oga
Tinokoshesa iwe uchitevera nhau uye ruzivo rwatinogovera kumakambani edu uye funga nezvezvenhau yako yakajeka. Chinangwa chedu ndechekuvimbisa kuti kutapudza kwedu kwakachengeteka uye iwe pachako hunochengetedzwa. Mukuwedzera, kana iwe uchitarisa mapeji edu webhusaiti, tinocherechedza izvozvo nokuda kwezvinangwa zvakadai sekuedza zvitsva, zvishandiso-zvigadziriswe zvirongwa uye nyaya dzinofarira iwe. Tichachengetedza chero ruzivo rupi zvarwo rwaunofunga kutumira; somuenzaniso, shandisa maimeri, mapurogiramu mazano, mibvunzo ine chokuita nezvirongwa pamakambani anoratidza, zvikumbiro zvekubvunzurudza, mapepa machena, webinars nemakwikwi.
Kuchengetedzwa Kwezvako Zvako
Chiziviso chedu chekuzviviga chinokuudza kuti iwe pachako data (PD) nedzimwe dzisiri-iwe pachako (NPD) tinogona kuunganidza kubva kwauri, kuti tinounganidza sei, kuti tinozvidzivirira sei, sei iwe unogona kuzviwana uye kuchinja. Chiziviso chedu chepachivande chinotsanangurawo dzimwe kodzero dzepamutemo dzaunazvo nekuremekedza dunhu rako pachako.
Paunenge uchishandisa webhusaiti yedu uye mapurogiramu, uye kuendesa dunhu rega rega kwatiri, unogona kuva nemamwe kodzero pasi peGener Data Protection Regulation (GDPR) nemimwe mitemo. Zvichienderana nezvenzira yepamutemo yekugadzirisa dheinhau yako pachako, unogona kunge uine zvimwe kana kuti zvese kodzero dzinotevera:
Kodzero yekuudzwa - Une kodzero yekuziviswa nezvemashoko ega atinotora kubva kwauri, uye kuti tinoiita sei.
Izvo kodzero yekuwana - Une kodzero yekuwana chivimbiso chekuti iwe pachako data yako iri kushandiswa uye ine kodzero yekuwana dhepe rako pachako.
Iko kodzero yekugadzirisa - Une kodzero yekuti iwe pachako iwe pachako urongwa huripo hugadziriswe kana husina kururama kana husina kukwana.
Kodzero yekubvisa (kodzero yekukanganwika) - Une kodzero yekukumbira kubviswa kana kubviswa kwepasitori yako pachako kana pasina chikonzero chinokumanikidza kuti tirambe tichichigadzirisa.
Kodzero yekudzivirira kushandiswa - Une kodzero yeku'vhara 'kana kudzivisa kushandiswa kwedunhu rako pachako. Kana iwe pachako iwe pachako uchidzivirira, tinobvumirwa kuchengeta deta yako, asi kwete kuigadzirisa zvakare.
Kodzero yekutengesa deta – Iwe une kodzero yekukumbira uye kuwana dhepe yako iwe pachayo yawapa kwatiri uye kuishandisa nekuda kwezvinangwa zvako. Tichapa data yako kwauri mukati mezuva 30 yekukumbira kwako. Kuti ukumbire deta rako pachako, tapota tibvunze isu tichishandisa ruzivo rwepamusoro pezveruzhinji rwevhangeri.
Kodzero yekuramba - Une kodzero yekudzivisa isu kushandura dheinhau yako pachako nekuda kwezvikonzero zvinotevera: Kutaridzika kwakabva kune zvinodiwa zvakarurama kana kushanda kwebasa mukufarira kwevanhu / kushandiswa kwehurumende yepamutemo (kusanganisira kufurisa); Direct marketing (kusanganisira kufungidzira); uye Kuchengetedza nokuda kwezvakaitwa nesayenzi / zvinyorwa zvenhoroondo uye nhamba. Kodzero maererano nehutano hwekuita nekugadzirisa.
Kugadziriswa kwemunhu mumwe nomumwe uye kushambadzira - Iwe uchave nekodzero yekuisa pasi pechisarudzo chinobva mukugadzirisa kushandiswa kwezvinhu, kusanganisira kufungidzira, izvo zvinounza migumisiro yepamutemo pamusoro pako kana zvimwe zvakakunakira zvikuru.
Kuisa kunyunyuta kune vane masimba – Iwe une kodzero yekuisa chiremo kuvakuru vakuru vekutarisira kana ruzivo rwako rusina kushandiswa maererano neGener Data Protection Regulation. Kana vakuru vakuru vekutarisira vakakundikana kutarisa kunyunyuta kwako zvakanaka, iwe unogona kuva nekodzero yekugadzirisa mhinduro. Kuti uwane mamwe mashoko nezvekodzero dzako pasi pemutemo, shanya www.privacyshield.gov/
Hatisi kupa dheta kumutemo wekutonga kunze kwekutongwa kwematare. Kana izvi zvikaitika, tichaedza kukuzivisai nezvekukumbira kunze kwekuti isu takadziviswa zviri pamutemo kuti tisaita kudaro.
Paunoshandisa Broadcast Beat tinogona kushandisa "cookies", "web beacons", uye maitiro akafanana kuti aone mabasa ako. Izvi zviduku zvinyorwa zvinochengetwa paibhuku rako rakaoma, kwete paWebcastcast Beat website.
Tinoshandisa kuki kuti ikubatsire kufamba webhusaiti yeBroadcast Beat sezvinogona nyore, nekuyeuka ruzivo pamusoro penguva yako yemazuva ano. Hatishandisi teknolojia iyi kuti tione iwe kana kuti tinopinda mumusana wako. Iwe unogona kudzivisa makiki uye teknolojia yekutsvaga kuburikidza newe web browser yako.
Kuchengetedzwa uye kuchengetedza
Dhidhiyo yeBroadcast Beat ine mhizha yakachengetedzwa yekuchengetedza nzira panzvimbo yekuchengetedza kurasikirwa, kushandiswa zvisina kunaka, nekuchinjwa kwemashoko pasi pedu. Kunyange zvazvo pasina chinhu chakadai se "kuchengeteka kwakakwana" paInternet, tichatora matanho ose anonzwisisika ekusimbisa kuchengetedzwa kwemashoko ako.
Yese data inonyorwa kuburikidza ne SSL / TLS apo inoparadzaniswa pakati pemaseva edu uye browser yako. Nhoroondo yedu ye data haina kunyorwa (nokuti inoda kuwanika nokukurumidza), asi tinoenda kune hurefu hwakareba kuti tive nekutora data yako zororo.
Hatisi kutengesa kana kugovera iyi dheinhe nemamwe mapato matatu.
Isu tinoramba tichichengetedza zvigadzirwa, zvakagadzirirwa kuipa kwekugadzirisa hurongwa, kwemazuva 30. Izvo zvipembenene zvinonatswa pakufamba kwezuva 30 zuva. Apo ma-mail ari kuverengwa uye asina kuponeswa, anongobva atsveneswa pa 30-zuva-cycle.
Kuchinja uye Mibvunzo
Kuchinjwa kwechirevo ichi kuchaendeswa kune URL iyi uye ichabudirira kana yakatumirwa. Kuenderera mberi kwako kushandiswa kwechirongwa ichi mushure mokutumira chero kushandurwa, kushandurwa, kana kuchinja kuchaita kuti iwe ugamuchire kugadziriswa. Tichakuzivisa nezvekuchinja kukuru kuburikidza nekunyora email kumudzidzi webhuku kana nekuisa chiziviso chakakurumbira panzvimbo yedu. Kana iwe uine mibvunzo pamusoro pehutatimende hwehupombwe kana hutano hwako neBroadcast Beat, unogona kutitaurira pa Editor@broadcastbeat.com.